के गुल्मीको रेसुङ्गामा साँच्चै भुत भेटिएको हो? खास कुरो यस्तो छ: – Gulmiews
के गुल्मीको रेसुङ्गामा साँच्चै भुत भेटिएको हो? खास कुरो यस्तो छ:
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १५:४९ Sanju Kauchha
No comments	सोमबार दिउंसो फेसबुकमा एकाएक गुल्मीको रेसुङ्गामा अनौठो दृष्‍य देखा परेको बारे पोस्ट आयो । फिल्मका भुत जस्तो डरलाग्दो देखिने ३ तस्बिरहरु सहित आएको त्यो पोस्ट एकाएक भाईरल बन्यो । ताजा पोस्ट नामको जेपिटी फेसबुक समुहबाट पोस्ट भएको सो पोस्टले खुबै सनसनी मच्चायो । धेरैले लाईक ठोके, कमेण्ट गरे । थुप्रै पटक शेयर पनि भयो । अरु तेस्तै बकम्फुसे केही पेजहरुले रिपोस्ट पनि गर्न भ्याईहले ।
के थियो त्यो पोस्टमा ?
ताजा अप्डेट नामको बकम्फुसे पेज जसमा धेरै जसो बकम्फुसे पोस्टहरु मात्र हुनेरैछ । उक्त पोस्ट पनि त्यसैको निरन्तरता रहेछ । उक्त पेजको एड्मिनले अरुलाई पत्याउने गराउने हिसाबले लेख्न खोजेको देखिन्छ ।
लेखाई यस्तो छ:
के होला यो ???
२०७२/११/९ गते देखा परेको तम्घास रेसुङा बनमा यो डरलाग्दो दृश्य के होला त यो..?
काहा बाट आएको होला..? इ सबै प्रश्नले अहिले त्याहाका बासिन्दाहरुको मनमा डर पैदा गरेको छ।
कसैले भन्छन भुत प्रेत हो त कसैले भन्छन बन झाक्री हो सरकारले एस्मा कुनै ध्यान दिएको छैन तर इस्तानिय बासिन्दाले भने रेसुङा जङल जान नै छाडेका छन।
फेसबुकमा बाँडिएको भ्रामक पोस्ट
तपाईं हामी धेरै जनाले त यो पोस्ट लेखाई र फोटो देखेर नै सजिलै छुट्टाईहाल्यौँ सो सब अरुलाई उल्लु बनाई लाईक बटुल्ने काम मात्र हो भन्ने । यसमा फिटिक्कै सत्यता छैन भन्ने पनि धेरै बुझ्यौ तर पनि धेरै जनाले गुल्मीन्युजलाई ईमेल गरेरै सोध्नुभयो यस्को सत्यतथ्यता र अधिकारीकताको बारेमा । एकजना मित्रले त गुल्मीन्युजलाई गाली पनि गर्नुभयो यात्रो घटना हुँदा पनि गुल्मीन्युजले समाचार सम्प्रेषण गरेन भनेर । भ्रममा पर्नुभएका मित्रहरु वा भनौँ त्यो पोस्टलाई साँच्चै ठान्नुभएको मित्रहरुको भ्रमलाई चिर्नको लागि यो पोस्ट तयार पारीएको हो । पत्याउनुस् त्यो सबै झुट हो । फोटोमा देखाईए जस्तो रेसुङ्गामा केही पनि फेला परेको छैन भने त्यहाँ भनिए जस्तो स्थानिय बासिन्दाहरु पनि जंगल जानै छोडेका पनी छैनन् ।
खास कुरा के हो? के हो त फोटोमा देखिएको ?
खासमा यो फोटो र समाचार पाकिस्तानबाट सोसल मेडिया र ईन्टर्नेटमा आएको रहेछ । पाकिस्तानको रावलपिण्डीमा अनौठो जन्तु देखियो भनेर स्थानिय पत्रीका तथा अन्लाईनहरुले पनि समाचार छापेका रहेछन् जुन पछी पुषटी हुन सकेन । त्यहाँको स्थानिय अन्लाईन फोरुमहरुमा पही ठुलै बहस बनेको रहेछ । धेरैले यसलाई बकवास र प्र्यान्क भनेका छन् । खासमा पहिलो चित्रमा देखिएको रातीको बेलामा सेतो च्यादर ओढेको मान्छे रहेछ । नजिकबाट कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् तल फोटो । अनी तेस्रो फोटो भने कुनै भुतको टाउको नभएर मास्क (रबर मुकुण्डो/नकाब) रहेछ जुन ईन्टरनेटमा सस्तैमा किन्न पाईन्छ । रह्यो कुरो दोस्रो फोटो वा खुट्टाको । त्यो भने जुम गरिएको वा एकदम नजिकबाट खिचिएको कुनै घरपालुवा/जङ्गली जनावरको खुट्टाको फोटो हुन सक्दछ वा फोटोसप गरेर बनाईएको पनि हुन सक्दछ ।
पाकिस्तानमा स्थानिय पत्रीकाले छापेको समाचार
यसो भन्छन् सरोकारवाला:
रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालसंग गुल्मीन्युज सहकर्मी प्रेम सुनारले सम्पर्क राख्दा उनले भने, ‘खै मलाई केहि पनि थाह छैन, बेकारमा कसले हल्ला फैलायो ।’ उनले रेसुङ्गामा बन फडानी बढ्दै गए पछि त्यो रोक्नका लागि कसैले भुतको त्रास दिएको हुन सक्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले पनि यस्तो बेकारको हल्लाका पछाडी नलाग्न सर्वसाधरणसंग आग्रह गरे । अन्य सरोकारवालासंग बुझ्दा पनि रेसुङ्गामा भुत देखियो भन्ने हल्ला बन फाँडनी रोक्नकै लागि कसैले फैलाएको हुनसक्ने बताउँछन् ।